काठमाडौं उपत्यकामा एक हप्ता निषेधाज्ञा थपियो, के खुल्छ के खुल्दैन् ? - Recent Nepal News
काठमाडौं उपत्यकामा एक हप्ता निषेधाज्ञा थपियो, के खुल्छ के खुल्दैन् ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ३०, २०७८ समय: १७:०४:१७
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्र जारी निषेधाज्ञा एक साता थप हुने भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उपत्यकाभित्रका तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले थप एक साता निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको हो।
उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा गत वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा लागू भएको थियो। निषेधाज्ञा लागू भएको डेढ महिना पछि पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम कम नभइसकेकाले निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिन लागिएको जनाइएको छ ।